प्रहरीको नयाँ योजना : आदेश उल्लङ्घनकर्तालाई पक्राउ होइन ‘होल्ड’ …हेर्नुहोस!
अत्यावश्यक काम बाहेक बाहिर ननिस्कन जारी गरेको सरकारी आदेशवि,रुद्ध तपाईँ विना काम वा रमिता हेर्न भन्दै उ,पत्यकाका सडकमा निस्कने गर्नुभएको छ ? अब त्यसरी जानुभयो भने तपाईले सडकमै का,रवाही भोग्नुपर्ने छ । का,रवाही पनि विल्कुल फरक खालको । त्यसरी निस्किँदा प्रहरीले जहाँ भेट्छ त्यही ठाउँमा बस्नुपर्नेछ ।
यसअघि सरकारी आदेश उ,ल्लङ्घन गरेर निस्किँदा प्रहरीले प,क्राउ गथ्र्याे । अब प्रहरीले जुन ठाउँमा भेटेको छ, त्यही ठाउँमा केही घण्टाका लागि ‘होल्ड’ गर्ने (एकै ठाउँमा राख्ने) छ । त्यहाँबाट कहिँ जान पाईँदैन, केही घण्टापछि जुन ठाउँबाट आएको हो, त्यही ठाउँमा फर्कनुपर्छ । अत्यावश्यक काम बाहेक बाहिर ननिस्कन जारी गरेको आदेश उ,ल्लङ्घन गर्ने क्रम बढेपछि शुुक्रबारदेखि नेपाल प्रहरीले नि,यन्त्रण अभियानलाई तिब्रता दिएको थियो । यसरी नि,यन्त्रणमा लिँदा जो,खिम बढ्ने देखेपछि प्रहरीले का,रवाही अभियानलाई परिवर्तन गरेको हो ।
विश्वव्यापी फैलिइरहेको कोरोना भाइरस(कोभिड–१९) को स,ङ्क्रमण न्यूनीकरणका लागि सरकारले घो,षणा गरेको लकडाउनको शनिबार पाँचौ दिन पोखरामा पैदलयात्रीलाई सचेत गर्दै सुरक्षाकर्मी । तस्वीर ः कृष्ण दवाडी,रासस
विभिन्न ठाउँबाट प,क्राउ गर्दा सयौँको सङ्ख्यामा एकै ठाउँमा मानिसको भि,ड हुन्छ । भिड जम्मा गर्दा कसैमा रो,गको सं,क्रमण भए फैलनसक्ने स,म्भावना अधिक हुन्छ । प्रहरीमा रोग फैलियो भने समुदायमा जाने सम्भावना झन् बढी हुन्छ । त्यसैले आज मात्रै उपत्यकामा महानगरीय प्रहरी कार्यालय रानीपोखरीले आदेश उ,ल्लङ्घन गर्नेका लागि का,रवाहीको नयाँ नियम लागू गरेको छ ।
कार्यालयका प्रमुख प्रहरी नायब महानिरीक्षक विश्वराज सुवेदीले भन्नुभयो, “प,क्राउ गरेर लैजाँदा मानिस धेरै जम्मा हुने र राख्ने ठाउँको अभाव तथा भिड बढी हुँदा जो,खिम बढ्ने देखियो, त्यसैले अब कारवाही स्वरुप जसलाई जहाँ भेटिन्छ, उसलाई त्यहीँ होल्ड गर्न थालेका छौँ ।” उहाँका अनुसार सडकपेटीमा जहाँ भेटिन्छन्, त्यही ठाउँमा केही मिटरको दुरीमा मानिसलाई कम्तिमा दुई घ,ण्टा राखिने छ । त्यसो गर्दा उनीहरुलाई प्रहरीले छुन पनि पर्दैन । जसले सबैजना सु,रक्षित हुन सकिन्छ ।
उपत्यकाको काठमाडौँ, ललितपुर र भक्तपुर प्रहरी परिसरलाई उक्त विषयमा निर्देशन नै दिइसकेको पोखरेलले बताउनुुभयो । एकै ठाउँमा बस्दा उ,ल्लङ्घनकर्तामा एउटा चे,तावनी पनि हुने र जो,खिम पनि कम हुने प्रहरीको वि,श्लेषण छ । अत्यावश्यक कामबाहेक बाहिर ननिस्कन सरकारले जारी गरेको आदेश उ,ल्लङ्घन गर्ने वि,रुद्ध क,डारूपमा प्रस्तुत भएको प्रहरीले अपराह्नसम्ममा पाँच सय बढीलाई नि,यन्त्रणमा लिएको थियो । उनीहरुमध्ये धेरैलाई प्रहरीले आजै छाडिसकेको छ । यसरी प,क्राउ गर्दा स,मस्या देखिएपछि प्रहरीले आजदेखि उक्त काम थालेको हो ।
कोरोना भाइरसको स,ङ्मण रो,कथामका लागि सरकारले जारी गरेको आदेशलाई बेवास्ता गर्ने क्रम भने अझै रोकिएको छैन । चेतना भएर पनि मानिसमा ला,परवाही गर्ने क्रम देखिएको छ । अन्य बेलाको जस्तो ब,न्द नभएकाले स्वास्थ्यमा खेलवाड गर्न नहुने चि,कित्सकहरुले बताउँदै आएका छन् । साँझ बिहान अझै बढी मान्छे नि,स्किने गरेका छन् । दिनदिनै जो,खिम रहेको र एउटाको ला,परवाहीले आम समुदायलाई नै असर गर्ने भएकाले कुनै सम्झौता गर्न नसक्ने प्रहरीले जनाएको छ । घरमै बसेर घरमै रमाउनुभन्दा अन्य विकल्प नहुने मनोविद पदमराज जोशी बताउनुहुन्छ ।
विश्वव्यापीरूपमा कोरोना भइरसको म,हामारी बढ्दै गएपछि सरकारले यही चैत ११ गतेदेखि लागू हुने गरी यही चैत १८ गते बिहान ६ः०० बजेसम्म अत्यावश्यकबाहेक बाहिर ननिस्कन आदेश जारी गरेको थियो । आज पाँचौँ दिन मुख्य सडक र बजारमा सरकारी आदेशको पूर्ण कार्यान्वयन भएको देखिएको छ । तर भित्री बजार र सडकमा भने अझै मानिसको चहलपहल देखिन्छ । साँझको समयमा बढी नि,गरानी जरुरी रहेको स्थानीयले बताएका छन् ।
मुलुकमा कोभिड–१९ को सं,क्रमण फैलिन नदिन सरकारले उच्च सतर्कता अपनाउँदै आएको छ । मुलुक लकडाउन भएपछि खाद्यान्नलगायत अत्यावश्यक सामग्रीको अभाव हुन नदिन सरकारले आवश्यक व्यवस्था समेत मिलाएको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ । रासस